Tsy ho amin’ny fanovana lalàmpanorenana : tonga eto hiresaka fifidianana filoham-pirenena ny ONU | NewsMada
Tsy ho amin’ny fanovana lalàmpanorenana : tonga eto hiresaka fifidianana filoham-pirenena ny ONU
Tohin’ny fihaonana tany New York. Nigadona, omaly eto amintsika , ny solontena manokan’ny sekretera jeneralin’ny ONU sady lehiben’ny biraon’ny Firenena mikambana eo anivon’ny Vondrona afrikanina (UNOAU), Haile Menkerios.
Anisan’ny anton-dian’ity vahiny ity ny hijery sy hanara-maso ny fanomanana sy ny fikarakarana fifidianana filoham-pirenena, hatao eto amintsika amin’ny taona ho avy. Tsy hisy resaka fanitsiana na fanovana lalàmpanorenana izany. Efa nihaona mivantana rahateo ny filoha Rajaonarimampianina sy ny sekretera jeneralin’ny ONU, Antonio Guteurres, tamin’ny fihaonana ny 24 septambra teo, tany New York. Tsy misy resaka fikitihana lalàmpanorenana mihitsy ny dinika. “Nodinihina ny fomba hirosoana amin’ny fampihavanam-pirenena. Ilaina izany mba hahafahana miatrika fifidianana ao anatin’ny fitoniana ary handraisan’ny rehetra anjara”, hoy i Antonio Guterres tamin’izany.
Etsy andaniny, mirona any amin’ny fifidianana fa tsy fitsapan-kevi-bahoaka avokoa ny sehatra iraisam-pirenena. “Mifantoka amin’ny resaka fifidianana filoham-pirenena ny fanampiana ataonay fa tsy any amin’ny fifidianana zavatra hafa, hametrahana fanontaniana. Efa nanokananay famatsiam-bola ny fifidianana efa nambaran’ny Ceni”, hoy ny solontena lefitry Pnud, i Marie Dimond.
Hanao ny amboletrany ny fitondrana
Ny an’ny masoivoho amerikanina indray, nilaza fa izy tsy azo atao ambanin-javatra ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona ho avy. Mbola maromaro rahateo ireo tokony hatao sy hotanterahina eto amin’ny firenena. “Efa mijoro ny Filankevitry ny fampihavanana (CFM) ary hanomboka hiasa. Eo koa ny fanisam-bahoaka amin’izao fotoana izao ary koa ny hanaovana fifidianana filoham-pirenena », hoy i Robert Yamate. Araka izany, mbola hanao amboletra sy di-doha hanitsy lalàmpanorenana ihany ny mpitondra manoloana izany rehetra izany ?